Merry Christmas maniry avy Ningbo Joiwo Explosionproof-News-Ningbo Joiwo Explosion proof Technology Co., LTD
FIAINANA: 2020-12-22 HITS: 8
Tratry ny KRISMASY ! ------- Ningbo Joiwo
Akaiky indray ny fialantsasatry ny Noely sy ny Taom-baovao. Tianay ny manolotra ny firarianay feno firariana ho an'ny vanim-potoana fialantsasatra ho avy ary maniry ny Krismasy sambatra sy taom-baovao mirary ho anao sy ny fianakavianao.
Enga anie ny taom-baovao ho feno fotoana manokana, hafanana, fiadanam-po sy fahasambarana, ny fifalian'ny rakotra akaiky, ary maniry anao ny fifaliana rehetra amin'ny Krismasy sy ny taona fahasambarana.
Ny andraikitr'i Ningbo Joiwo dia ny hanome ny vokatra tsara indrindra ho an'ny mpanjifa sy ny serivisy tena tsara. Manantena ny taona manaraka ho taom-pambinana sy fijinjana ho antsika roa tonta!
Farany fa tsy farany, raha vao misy ny fangatahanao momba ny Explosionproof / Telefaona tsy misy toetr'andro, intercom, telefaona fonja, telefaona ampahibemaso, telefaona VOIP, telefaona vonjy maika izay azo ampiasaina amin'ny filana manokana toy ny faritra mampidi-doza, tontolo mando sy tabataba amin'ny andro manaraka, manantena fa afaka mahazo fahalalahana hifandray aminay ianao, izay ankasitrahana indrindra.
Ampahafantaro ny jiro / fampitandremana / flasher tsy misy rano sy fipoahana
Joiwo JWBT820 VOIP / IP / SIP faritra mampidi-doza fipoahana finday napetraka ao amin'ny orinasa Chemical.